Izwe adumile brand ezemidlalo isembatho, "Adidas" sihlotshaniswa uphawu ehlanganisa emapheshana ezintathu. Futhi zonke sibonga umsunguli wayo , Adi Dassler, abenyukela ngokuqinile "Adidas" isithonjana. Nguye abenyukela umbono ukwakha izicathulo kubagijimi ukuthi sasiyophawuleka kusukela ukuphumula. Ukuze uthole ngesisekelo Adi ngathatha emapheshana ezintathu, okuyinto ngokushesha base ngcono. Ngemva kweminyaka embalwa, waqala ukukhiqiza izicathulo hhayi kuphela, kodwa futhi eliphezulu izingubo.
Eminyakeni 70 ngokuqinile "Adidas", udumo kabani isithonjana imzuzele kakade, Ushintshe logo kakhulu. Impumelelo obuqand inkampani ezemidlalo isembatho waphefumulela abasunguli ehlukahlukene logo ajwayelekile. Ngakho kwaba khona Shamrock, ogxile emapheshana ezintathu. Zonke lezi izenzakalo ezandulela yokuthi inkampani "Adidas", okuyinto isithonjana - a Shamrock, kwakuqala ukwanda okukhulu futhi uye waba nezemidlalo jikelele brand.
Kungani ezintathu isithonjana ezahlukene?
Namuhla, inkampani "Adidas" waqala ukuveza, ngaphezu izingubo, ezemidlalo izesekeli izimfanelo. Ngenxa yalokhu ngokoqobo wonke umuntu uyazi ukuthi kubukeka kanjani isithonjana "Adidas". Ukuthandwa omkhulu, ukufuneka kakhulu kule yokuthengisa emakethe, kwaphoqa inkampani ukudala logo ezintathu ezisemthethweni.
Into wukuthi okwamanje, "Adidas" has ezintathu umugqa nezemidlalo:
Original - izingubo, eyayise-umsuka inkampani, ngendlela kude ngo-1970. Blazers, sweatshirts, izikibha nge sleeves ne bands nokunwebeka, izicathulo ezemidlalo. Uphawu lo mugqa waba Shamrock ngemivimbo ezintathu ovundlile.
Ukusebenza - zokugqoka abadlali professional kanye nayizimfundamakhwela. Isici esivelele sesimiso lo mugqa kukhona ukuthuthukiswa yakamuva zokwakha kanye nobuchwepheshe. Lena izingubo ukuthi yakhelwe nje kwezemidlalo. Ukuze lo mugqa abakhethiwe ngokuqinile "Adidas" unxantathu isithonjana ngemivimbo ezintathu.
Y-3 - izingubo ozinikezele futhi ozinikezele okuthiwa ikilasi "okunethezeka". Abakhiqizi ngokwabo ukubona nje enjalo izingubo ngekusasa. Lo mugqa isebenzisa isithonjana umbuthano lapho emapheshana ezintathu.
Amaphijama zabesifazane, "Avon": izibuyekezo zamakhasimende, imodeli kanye Indwangu Ukwakheka
Ukukhetha zezingane ezemidlalo isudi
Kanjani ukusebenzisa isexwayiso umyalo wokuba umphathi: imfundo Wabasaqalayo
Imibhalo sidonsa efulethini. Ukwenza intela ebanjwayo uma uthenga ifulethi
Ngidinga ukwazi ukuthi ngingaba kanjani idemoni?
Exchange amarobhothi abahwebi emakethe yamasheya: Izibuyekezo
Upelepele obomvu izakhiwo ewusizo kwayo okuqukethwe ikhalori